Tongasoa eto amin'ny pejy fanohananay
Ahoana no fomba hiarahako miasa amin'ireo mpikambana ao amin'ny ekipa amin'ny fitsarana maimaim-poana?
Ampidiro mpikambana ao amin'ny ekipa araka izay irinao amin'ny fitsapana maimaim-poana 30 andro mForce365 … dia ho afaka hiara-hiasa mora foana ianareo rehetra!
Mandehana fotsiny any amin'ny fivarotana Microsoft ary misoratra anarana maimaim-poana - tsotra izany!
Manana fanontaniana manokana? Alefaso mailaka haingana izahay support@makemeetingsmatter.com
Ny fototry ny mForce365
Ny mForce365 dia natao ho mora azo hiasa ao anatin'ny topografika fivoriana ara-kolontsaina manokana an'ny orinasanao. Ny sehatra dia mamela anao sy ny mpampiasa anao hanamboatra mora foana, ary avy eo dia miasa ao anatin'ny ekipa misy anao sy ny rafitry ny tetikasan'ny Organisation anao mba hanomezana fahafaham-po ny fiaraha-miasa amin'ny fivoriana. Ny kaontinao mForce365 dia mampifandray ny olona rehetra miara-miasa manodidina ny fivorianao, ny zavatra ataonao, ny ekipa, ny tetikasa, ny rakitra, ary ny maro hafa.
Ny mpampiasa dia afaka:
Manomàna, mitantana ary mamoaka naoty ho an’ny fivoriana
Manendre zavatra asa
Mamorona tetikasa mForce365
Ampidiro ny rakitra sy ny naoty ho an'ny famakiana mialoha, mandritra ary aorian'ny fivoriana
Miara-miasa amin'ny mpampiasa hafa rehetra
Manana takelaka fampahafantarana misintona fitaratra tokana amin'ny endrika One Note, ToDo, Planner, Teams ary maro hafa!
mForce3 65 Karazana mpampiasa
Ny karazana mpampiasa mForce365 dia mifehy ny zavatra hitan'ny mpampiasa/idirana ao amin'ny rafitrao. Ny karazana mpampiasa tsirairay dia omena ambaratonga samihafa amin'ny fidirana amin'ny atiny. Ny fidirana dia ny zavatra tsirairay ao amin'ny rafitra nasaina mivantana hojerena. Ny karazana mpampiasa rehetra ao amin'ny rafitra dia afaka maneho hevitra, ary manampy rakitra amin'ny, zavatra (fivoriana, zavatra atao, tetikasa) nasaina handray anjara.
Ireo mpikambana afaka mamorona / mijery / miditra / maneho hevitra momba ny Fihaonana, Zavatra Hetsika, Tetikasa, Ekipa, ary rakitra ao anatin'ny Dashboard-nao. Ny mpikambana dia azo atao dia afaka mamorona ny votoatiny manokana.
Vahiny tsy maintsy asaina miharihary hijery votoaty manokana ao amin'ny rafitrao ny Mpikambana. Ny vahiny dia mety ho mpiasa anatiny na mpandray anjara ivelany (mpiantoka, mpiara-miombon'antoka, sns…) izay tsy mila mamorona votoaty ao amin'ny rafitra, fa mety mila mamita zavatra iray nomen'ny Mpikambana azy na manampy rakitra amin'ny fivoriana. Tsy afaka mahita na inona na inona afa-tsy inona ny vahiny nasaina izy ireo hijery. Ny vahiny dia ampidirina ho azy ao amin'ny rafitra rehefa misy mpikambana manasa ny vahiny ho any amin'ny fivoriana iray, manome azy zavatra hetsika, na manasa azy ireo amin'ny tetikasa. Ny fampiasana ny fanendrena Vahiny dia fomba tsara hanamafisana ny orinasa isan-karazany, na koa ny fiaraha-miasa amin'ny ekipa tsy mila manome fidirana tsy ilaina na mampidi-doza amin'ny zavatra tsy tokony ho hitany. Mila 10 segondra ihany koa izy ireo vao misoratra anarana amin'ny kaontiny manokana ary maimaim-poana ho an'ny rehetra izany.
tetikasa dia mitovy amin'ny Ekipa, amin'ny maha-vondrona olona sy votoaty miaraka mba hamoronana tontolo iaraha-miasa. Ny tetikasa ao anatin'ny mForce365 dia miasa tahaka ny ataon'izy ireo ao amin'ny Fikambananao. Fomba iray ahafahana miantoka fa ny fivoriana manan-danja rehetra, ny zavatra momba ny hetsika, ny rakitra ary ny fiaraha-miasa mandrafitra tetikasa dia mivondrona hatrany ary mora sy mora azon'ireo izay mila izany indrindra.
Manana daty fanombohana sy fiafarana ihany koa ny tetikasa, ary amin'ny ankapobeny dia toy ny habaka/pejy virtoaly ho an'ny mpikambana ao amin'ny tetikasa hitahiry, hidirana ary hiara-hiasa manodidina ny atiny sy ny fitaovana. Ny tetikasa dia idirana amin'ny tabilao navigation Projects ao amin'ny Dashboard mForce365 anao, ary ny tetikasa tsirairay dia manana ny fijeriny 'pejy fandraisana' ny zava-drehetra nampian'ny mpikambana rehetra ao amin'ny tetikasa.
1. Inona no atao hoe mForce365?
mForce dia rindrambaiko fiaraha-miombon'antoka mifototra amin'ny rahona izay mampiasa ny fitaovana efa misy ao amin'ny ekipanao sy ny fizotran'ny asa mahazatra mba hanampiana amin'ny fisamborana, fizarana, ary avy eo hitantana mora foana ny fampahalalana mifandraika amin'ny fifanakalozam-baovao isaky ny fivoriana. Manampy ny ekipanao ny mForce hanao fivoriana mahomby sy mamokatra indrindra mba hampandrosoana ny fahombiazan'ny orinasa.
2. Ahoana no fomba hisoratra anarana amin'ny fitsapana mForce365 maimaim-poana?
Azonao atao ny misoratra anarana amin'ny fitsapana mForce 30 andro maimaim-poana, tsindrio Hitondra anao any amin'ny fivarotana Microsoft ianao ary ho afaka Misoratra anarana maimaim-poana - tsy mila carte de crédit.
3. Ahoana no ahafahako maka naoty amin'ny fivoriana mForce365?
Azonao atao ny mandray an-tsoratra amin'ny fivoriana iray amin'ny fipihana fotsiny ny fivoriana voalahatra ary safidio ny saha Notes. Azonao atao ihany koa ny manomboka a
"mF365Now", raha toa ka mila mandray an-tsoratra momba ny fivoriana tsy voalahatra ianao, an-tongotra.
4. Aiza no ahafahako mahazo vaovao farany momba ny Integrations mForce365?
Satria ny mForce365 dia Software ho Serivisy, mandeha ho azy ny fanavaozana rehetra sy ny fanatsarana ny endri-javatra - tsy mila manao na inona na inona ianao!
5. Ahoana no hividianako mForce365 ary ohatrinona ny vidiny?
mForce365 dia fampiharana SaaS izay nahazoana alalana ho saram-pamandrihana isam-bolana na isan-taona. Ny fisoratana anarana rehetra dia manana fitsapana maimaim-poana 30 andro, aorian'izay dia hahazo mailaka momba ny safidy fividianana ianao. Azonao atao ihany koa ny mividy amin'ny fotoana rehetra mandritra ny fitsapana maimaim-poana amin'ny tsindrio ny bokotra "Upgrade".
Azonao atao ny mividy fahazoan-dàlana ho an'ny mpampiasa betsaka ilainao amin'ny tsindry vitsivitsy. Ny seza tsirairay na ny fahazoan-dàlana mForce dia mitentina $9.90 isam-bolana (latsaky ny sakafo atoandro!), na $99 isan-taona (20% fihenam-bidy). Raha te hividy fahazoan-dàlana mihoatra ny 100 ianao na ho an'ny orinasa iray manontolo dia alefaso mailaka izahay amin'ny sales@makemeetingsmatter.com ary ny iray amin'ireo manam-pahaizana momba ny vokatra dia hiantso anao indray! Raha tsy izany dia mifandraisa amin'ny Microsoft EA anao mpamatsy vola manokana.
6. Inona no atao hoe kaonty Guest User ary ahoana no fiasan'izany?
Ny vahiny mForce365, dia mpampiasa izay nasaina ho amin'ny iray amin'ireo fivorian'ny mForce365 ary manana zavatra momba ny hetsika voatendry ho azy ireo. Tsy anisan'ny vondrona misy anao ny mpampiasa vahiny ary tsy mpampiasa karama. Ny mpampiasa vahiny dia mahazo fidirana voafetra amin'ny Pejin'ny mForce365 Dashboard mba hidirana sy hamita ny zavatra ataony.
7. Afaka mampiasa mForce ve aho rehefa ivelan'ny Internet?
Eny! Na dia mifototra amin'ny navigateur na avy amin'ny Native App aza ny mForce, raha very ny fifandraisanao ianao dia tsy misy olana - raha vantany vao ampifandraisinao ny mombamomba anao rehetra dia ho voafantina izay midika fa tsy very na oviana na oviana ny mombamomba anao!
8. Rehefa mitahiry sy mamoaka ny famintinana ny fivoriana aho, iza no afaka mahita azy ireo?
Ireo fivoriana izay voavonjy sy navoaka dia hitan'ny mpandray anjara amin'izany fivoriana izany. Azonao atao ny mizara ny famintinana ny fivoriana sy ny zavatra momba ny hetsika amin'ny olona rehetra, fa izay mpandray anjara sy nahazo alalana ihany no afaka miditra sy miara-miasa amin'ny Internet.
9. Mitovy amin'ny zavatra aseho ao amin'ny Pejin'ny Hetsika ve ireo zavatra atao ao amin'ny Dashboard?
Eny, mitovy ny lisitry ny zavatra Hetsika ao amin'ny pejin-tranonao sy ny pejin'ny zavatra Hetsika. Na izany aza, azonao atao ny manova mora foana ireo lisitra ireo mba hampisehoana zavatra hafa amin'ny hetsika amin'ny alàlan'ny fampiasana ny singa sivana (Vita sns). Ny lisitra roa dia tsy miankina amin'ny tsirairay fa samy manana ny fahafahana miditra amin'ny zavatra ataonao rehetra
10. Azo ovaina ve ny famintinana ny fivoriana rehefa atolotra?
Tsia, rehefa nisy famintinana natolotra ary nekena, ary misy PDF noforonina, tsy azo ovaina na fafana - firaketana tsy azo ovaina ho an'ny tanjona fanaraha-maso